Nei Vanhu Vachinyepa—Kutendeseka Ndekwechinyakare Here?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bislama Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mam Maya Mazatec (Huautla) Mende Mixe Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Ngangela Ngangela Nias Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Kutendeseka Ndekwechinyakare Here?
Hitoshi aiita zveakaunzi pane imwe kambani inotsvagira vanhu mabasa kuJapan. Paaiongorora akaunzi dzekambani nabhosi wake, Hitoshi akaudzwa kuti aitarisirwa kunyora zvekunyepa nezvemari dzekambani. Hitoshi akatsanangura kuti hana yake yaimurambidza kuita basa rine kusatendeseka. Izvi zvakaita kuti mukuru wake amuudze kuti aizodzingwa basa uye ndizvo zvakazoitika.
Mumwedzi yakazotevera, Hitoshi akanga asisina tariro yekuwana rimwe basa. Semuenzaniso mumwe musi paaibvunzwa kuti apinde basa, Hitoshi akataura kuti aisakwanisa kuita basa rine kusatendeseka. Munhu aimubvunza akashamiswa ndokuti, “Ndiwe munhu wandatanga kunzwa achitaura kudaro!” Hama neshamwari dzaHitoshi dzakamukurudzira kuti arambe akatendeseka, asi akatanga kusava nechokwadi kana izvozvo zvaiva nemusoro. Semuenzaniso, akatombotaura kuti, “Ndaisava nechokwadi kuti kubuda pachena pane zvandinotenda kunobatsira here.”
Zvakaitika kuna Hitoshi zvinongotiyeuchidza kuti haasi munhu wese anokoshesa kutendeseka. Vamwe vanotoona kutendeseka sekunotadzisa kubudirira, kunyanya mune zvebhizimisi. Mumwe mukadzi wekuSouth Africa anoenda kubasa anoti, “Vanhu vandinoshanda navo havana kutendeseka, uye dzimwe nguva ihondo chaiyo kuti ndisavatevedzera.”
Vanhu vakawanda mazuva ano vanoratidza kuti havana kutendeseka nekunyepa kwavanoita. Makore akapfuura, mumwe muongorori wemashandiro epfungwa anonzi Robert S. Feldman wepaUniversity of Massachusetts Amherst, akaona kuti pavanhu 10 vakuru, 6 vacho vanonyepa pese pavanotaura nevamwe mumaminitsi gumi ega ega. Feldman anoti, “Izvi zvakandishamisa chaizvo. Taisambofungidzira kuti vanhu vakawanda vanonyepa zvakadaro mazuva ese.” Chinotoshamisa ndezvokuti vanhu vakawanda havadi kunyeperwa, asi ivo vachinyeperwa.
Sei vakawanda mazuva ano vachinyepa, vachiba, nekuitawo zvimwe zvinhu zvinoratidza kusatendeseka? Kusatendeseka kunokanganisa sei magariro evanhu? Uye mubvunzo unonyanya kukosha ndewekuti: Tingaita sei kuti tisaguma tava kuita zvinhu izvi zvinoratidza kusatendeseka?